Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo dhageystay Warbixin la xiriirta dhul boobka ay Kenya ka wado Beledxaawo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo dhageystay Warbixin la xiriirta dhul boobka ay Kenya ka wado Beledxaawo[Sawirro]
MUQDISHO – Xildhibaanada golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhageystay warbixin la xiriirta dhul boobka ay dowladda Kenya ka wado degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Warbixinta guud ,waxaa Aqalka sare siiyay Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo kamid ahaa wafti dowladda Soomaaliya ka socda oo dhawaan tagay degmada Beledxaawo iyo deegaano dhanka xuduuda ku yaalla.
Gen. Fartaag waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay kusoo xadgudubtay dhanka degmada Beledxaawo isla markaana ku dhawaad 700 oo guryo cusub oo Soomaali leedahay xariiqdeen oo dhanka Kenya ay mareen.
Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag
Waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay la hadleen isla markaana ugu baaqeen in ay degenaan muujiyaan oo dowladooda ku kalsoonaadaan.
Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hadal kooban u jeediyay Xildhibaanada inta aan la soo xiririn Kalfadhiga labaad ee Aqalka sare ayaa dowladda ugu baaqay in ay arrimahan guddi gaar ah u saarto.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay Xildhibaanada Aqalka sare,wuxuu sheegay in wax badan ay qabteen labadii kalfadhi ee lasoo dhaafay,wuxuuna ku dhawaaqay in kalfadhiga labaad uu maanta xiran yahay isla markaana la qaban doono Xaflad lagu soo xirayo.